Ungakwazi yini ukungisiza ukuthi ngiqonde indlela yokwandisa uhlu lwe-Amazon nokukala ngaphezulu?
Akumangalisi ukuthi empeleni akunakwenzeka ukwandisa uhlu lwe-Amazon ngokumane urekhode umsindo kanye nokuqukethwe okuphoqelela ngokugcwele. Kungani? Kungenxa nje yokuthi ukucinga okucacile kwesimo se-algorithm esibhekene nale ndawo emakethe ye-intanethi egcwele indawo kuthatha izici eziningi ezicatshangelwayo uma kuziwa ekunikezeni isikhundla esithile sokubeka indawo ngayinye edayiswa khona. Yingakho ukuhlala isinyathelo esisodwa ngaphambi kwesigaba sakho se-niche / umkhiqizo ophikisana nawe ngokuqinisekile uzodinga ukuqonda okujulile kwe-Amazon SEO ngaphandle kwebhokisi lakho lokufaka kuhlu. Kodwa asikho isidingo sokukhathazeka - konke akunjalo okuyinkimbinkimbi njengoba kungase kubonakale ekuqaleni.
Into yukuthi ungakwazi ukulungisa uhlu lwe-Amazon ngendlela efanele kuphela uma ubheja ezindaweni ezifanele zesigaba ezisetshenzisiwe yi-A9 ayiyona eyinkimbinkimbi yokusesha i-algorithm. Eqinisweni, i-A9 ngokuyinhloko ixhomeke ezinhlotsheni ezimbili zokubeka izici - izici zokusebenza, kanye nezici zokubaluleka.
Izici zokusebenza - zihamba ngokuzungeze amamethrikhi ayisihluthulelo njengezinga lokuchofoza (CTR), izinga lokuguqulwa, kanye nokuthuthukiswa kwakho okujwayelekile okuthunyelwe ngesilinganiso. Kulula, lezi zici zibonisa indlela oye wenza kahle ngayo nomkhiqizo wakho nokwaneliseka kwamakhasimende kuze kube manje.
Izinto ezibalulekile - zilula kakhulu, njengoba lezi zici zikhombisa nje ukuthi umkhiqizo wakho uhambelana kanjani nemibandela yosesho evame ukusetshenziswa kabanzi ngabathengi abafuna imikhiqizo e-Amazon. Ngamanye amazwi, izici eziyinhloko zokubheka zibheja ngokuyinhloko ekusetshenzisweni okulungile kwamagama angukhiye abalulekile (kanye nemishwana yokusesha emide), kanye nendawo yabo engcono kakhulu oyithathayo ukuze ukwandise uhlu lwakho lwe-Amazon.
Kuzo zonke izici zokusebenza nokubaluleka okuhlanganisiwe ndawonye futhi kuhlolwe, nansi uhlu lwamaphoyinti ezinhlamvu ukuze uthole isithombe esikhulu sokuthuthukisa ama-ecommerce futhi uqonde wonke amantongomane namakhilodi enqubo. Ngakho-ke, uma ufuna ukukhulisa uhlu lwe-Amazon njengomthengisi wangempela wesikhathi eside kanye nochwepheshe we-SEO - konke okukodwa - cabangela lezi ziphakamiso ezisebenzayo ezibalwe ngezansi futhi usekelwa ngezithombe ezimbalwa ezibandayo ezibandayo:
Kungase kubonakale sengathi ayikho i-brainer, kodwa ikhasi lokuqala nemiphumela yosesho ivame ukuthola cishe konke ukuchofoza komsebenzisi (cishe u-97%);
Kuyini okuthakazelisayo ngempela ukuthi mayelana nezicelo ezingu-70% zezicelo ezisetshenziselwa abathengi bukhoma e-Amazon ziyimpendulo yosesho eside;
Igama elingukhiye elibonakalayo libonwa ngu-A9 njengesici esinamandla kakhulu, ngakho qinisekisa ukuthi uyazi ukuthi wenzani, okusho ukuthi uma kuziwa ekukhetheni indawo efanelekile yamagama angukhiye oyinhloko esihlokweni somkhiqizo wakho, uhlu lwamaphuzu e-bullet, incazelo yomkhiqizo uqobo, kanye nemininingwane yokusesha ye-Seller Central backend;
Ukuba nethuluzi lokucwaninga elingukhiye wegama elingukhiye kanye nesofthiwe ye-CTR tracker kuyisidingo esiqakathekile kubo bonke abathengisi abaphumelelayo abathengisa ngaphesheya, kunokuba kunjani uhlobo lokunethezeka;
Uma ufuna ukuthuthukisa uhlu lwakho lwe-Amazon ngendlela efanele kusukela ekuqaleni, gxila imizamo yakho eyinhloko ye-SEO kulezi zakhi ezilandelayo ukushayela i-CTR yakho, njengesihloko somkhiqizo, intengo yento, inani lentengo, izithombe zomkhiqizo, i-FBA (Prime), ukutholakala kwesitokwe, isigaba somkhiqizo esifanele, ilebula yezinto ezihamba phambili, izindleko zokuthumela, isici / izinzuzo zokubuka kuqala, nezinye izinto ezithengayo Source .